MPL Myanmar Season (3) ခနျြပီယံ Burmese Ghouls MLBB မှ Kid နှငျ့ တှဆေုံ့ခွငျး – Gaming Noodle
ပထမဆုံး Episode (1) ကိုတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အအောငျမွငျဆုံး Esports အဖှဲ့အစညျး တဈခုဖွဈတဲ့ Burmese Ghouls ရဲ့ MLBB အသငျးက “Kid” နဲ့ တှဆေုံ့ မေးမွနျးသှားမှာပါ။ မကွာသေးမီကပဲ MPL Myanmar ခနျြပီယံဆု ရရှိခဲ့သလို့ မကွာခငျရကျပိုငျးမှာလညျး MLBB World Championship M1 ကို မလေးရှားနိုငျငံမှာ သှားရောကျယှဉျပွိုငျတော့မယျ့ Kid ကတော့ MLBB Community ကွားမှာ ရပေနျးစားနတေဲ့ ကစားသမားတဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။
GamingNoodle : မင်ျဂလာပါ Kid ရေ။
Kid : မင်ျဂလာပါ ခငျဗြာ။
GamingNoodle : Kid ရဲ့နာမညျရငျးနဲ့ အသကျကို ပွောပွပေးပါဦး။
Kid : ကြှနျတေျာ့နာမညျရငျးက ဟိနျးမငျးသူပါ။ အသကျက ၁၅ နှဈရှိပါပွီဗြ။
GamingNoodle : Kid ရဲ့ လကျရှိ ပညာရေးကရော။
Kid : လောလောဆယျတော့ ဆယျတနျးကို ခဏနားပွီး Gaming Career ကိုအာရုံစိုကျနပေါတယျ။ နောကျနှဈတော့ ပွနျတကျဖွဈမှာပါခငျဗြ။
GamingNoodle : MLBB ကိုဘာလို့ စပွီး ဆော့ဖွဈခဲ့တာလဲဗြ?
Kid : ကြှနျတျောက MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) game တှပေိုစိတျဝငျစားလို့ပါခငျဗြ။
GamingNoodle :Kid ဆိုတဲ့ In-game name ကို ဘယျလိုပေးဖွဈခဲ့တာလဲ?
Kid : ကြှနျတေျာ့အရငျ squad ဖွဈတဲ့ Team Accident မှာ ကြှနျတျောက အငယျဆုံး player ဖွဈနတေော့ kid လို့ပေးဖဈသှားတာပါ။
GamingNoodle :ဘယျအခြိနျမှာ Professional ဆော့မယျလို့ စပွီး စိတျကူးခဲ့လဲ?
Kid : Huawei nova champion Season1 အပွီးမှာပါ။
GamingNoodle :Professional ဘဝကို ဘယျအသငျးနဲ့ စတငျခဲ့လဲဗြ။ ဆော့ခဲ့ဖူးတဲ့အသငျးတှကေိုလညျးပွောပွပေးပါဦး။
Kid : Team Resolution, Maven Esport, Claw Esport တို့မှာ ဆော့ခဲ့ပါတယျ။
Credit: Claw Esports
GamingNoodle :Claw ကနေ BG ကို ဘာလို့ ပွောငျးလာတာလဲ?
Kid : ကြှနျတျောဖွဈခငျြတဲ့ ဆန်ဒတဈခု အတှကျ အပွောငျးအလဲ လုပျခဲ့တာပါ၊ ဒါက ကြှနျတေျာ့ အတှကျ ဆုံးဖွတျခကျြခလြိုကျတဲ့ အခါမှာ ကံဆိုး ကံကောငျးပဲဗြ၊ ကြှနျတေျာ့အိပျမကျဖွဈတဲ့ champion ဖွဈဖို့ အသငျးပွောငျးခဲ့တယျ၊ ပီးတော့ နဂိုတညျးက BG အသငျးသားတှနေဲ့ ရငျးနှီးပွီးသား ဖွဈနတောလညျးပါပါတယျ။
GamingNoodle :BG မှာ ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ အခွအေနနေဲ့ အခွားအရငျက ဆော့ခဲ့တဲ့ အသငျးတှကွေားမှာ ကှာခွားမှုရှိလား?
Kid : Training တှကေို သခြောဂရုတစိုကျနဲ့ ဆော့ဖွဈ လာပါတယျ။
GamingNoodle :MPL Season3Myanmar အတှကျ ဘယျလို ပွငျဆငျမှုတှေ ပွုလုပျခဲ့လဲ?
Kid : အမြားကွီးပဲဗြ တျောတျောတော့ အခြိနျယူပွငျဆငျခဲ့ရပါတယျ၊ ပငျပနျးသလို ပငျပနျးတာနဲ့ ထိုကျတနျတဲ့ ရလဒျလညျး ရရှိခဲ့လို့ ပြျောပါတယျ။
GamingNoodle :မလေးရှား World Champion M1 ပှဲအတှကျရော ဘာတှေ ပွငျဆငျထားလဲ?
Kid : Training တှေ ပွီးတော့ အခွားအသငျးတှရေဲ့ ပှဲတှပွေနျကွညျ့၊ လလေ့ာသငျ့တာ လလေ့ာပွီး မွနျမာကိုယျစားပွုအဖွဈအကောငျးဆုံး ယှဉျပွိုငျသှားမှာပါ။
GamingNoodle :ပထမဆုံး နိုငျငံခွား LAN Final ပှဲအတှကျ ဘယျလိုခံစားရလဲ?
Kid : လောလောဆယျကတော့ စိတျလှုပျရှားနတေယျ၊ လုပျနိုငျမယျလို့လဲ ယုံကွညျပါတယျ။
GamingNoodle :ညီက အသကျငယျငယျနဲ့ Professional ကစားသမားဖွဈနတောဆိုတော့ မိဘတှကေရော ဘယျလို Support ပေးလဲ?
Kid : မိသားစု က ကတြော့ကို လိုအပျတာ မှနျသမြှ support လုပျပေးပါတယျ။ အဲ့အတှကျလညျး ကြှနျတေျာ့ မိဘတှေ ကိုနားလညျပေးလို့ ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျလို့ပွောခငျြပါတယျခငျဗြ။
GamingNoodle :မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လကျရှိအကောငျးဆုံး mid player ဆိုပွီး ပရိသတျတှေ သတျမှတျနကွေတဲ့အပျေါရော ဘယျလိုမွငျလဲ?
Kid : ကြှနျတျောက တော့ ကိုယျလုပျနိုငျတာထကျပိုပွီး အကောငျးဆုံးဆော့ပါတယျ၊ အကောငျးဆုံးလို့သတျမှတျဖို့ ကတြော့ အသငျးရဲ့ အကောငျးဆုံး back up တှေ မရှိပဲ သတျမှတျလို့တော့ မရဘူးဗြ။
GamingNoodle : MLBB အပွငျ တခွား ဘာဂိမျးတှဆေော့ဖွဈသေးလဲ?
Kid : Dota Underlords, Vainglory, Clash of Clan, Clash of Royals စတဲ့ ဂိမျးတှတေော့ ဆော့ဖွဈပါတယျ။
GamingNoodle : ညီ့ရဲ့ ပရိသတျတှရေော BG ပရိသတျတှကေိုပါ အမှာစကားလေးပွောပေးပါဦး။
Kid : ကြှနျတျာ့ ကိုအားပေးနတေဲ့ သူတှရေော အသငျးကိုအားပေးနတေဲ့ သူတှရေော ကြေးဇူးအရမျးတငျပါတယျ။ ကြှနျတျော M1 မှာ champion ရအောငျ BG နဲ့ အတူ ကွိုးစားသှားပွီး ပါမယျလို့လညျး ကတိပွုပါတယျ ခငျဗြာ။
Credit : MLBB-MM
အခုလို အခြိနျပေးပွီ ဖွကွေားပေးတဲ့ Kid နဲ့ မွနျမာကိုယျစားပွု ယှဉျပွိုငျရမယျ့ Burmese Ghouls MLBB တဈသငျးလုံးကို World Championship ပွိုငျပှဲမှာ အောငျမွငျမှုတှေ ရလာပါစလေို့ ကြှနျတျောတို့ Gaming Noodle မှ ဆုမှနျကောငျး တောငျးပေးလိုကျပါတယျ ခငျဗြာ။
MPL Myanmar Season (3) ချန်ပီယံ Burmese Ghouls MLBB မှ Kid နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ပထမဆုံး Episode (1) ကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး Esports အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Burmese Ghouls ရဲ့ MLBB အသင်းက “Kid” နဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းသွားမှာပါ။ မကြာသေးမီကပဲ MPL Myanmar ချန်ပီယံဆု ရရှိခဲ့သလို့ မကြာခင်ရက်ပိုင်းမှာလည်း MLBB World Championship M1 ကို မလေးရှားနိုင်ငံမှာ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်တော့မယ့် Kid ကတော့ MLBB Community ကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
GamingNoodle : မင်္ဂလာပါ Kid ရေ။
Kid : မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ။
GamingNoodle : Kid ရဲ့နာမည်ရင်းနဲ့ အသက်ကို ပြောပြပေးပါဦး။
Kid : ကျွန်တော့်နာမည်ရင်းက ဟိန်းမင်းသူပါ။ အသက်က ၁၅ နှစ်ရှိပါပြီဗျ။
GamingNoodle : Kid ရဲ့ လက်ရှိ ပညာရေးကရော။
Kid : လောလောဆယ်တော့ ဆယ်တန်းကို ခဏနားပြီး Gaming Career ကိုအာရုံစိုက်နေပါတယ်။ နောက်နှစ်တော့ ပြန်တက်ဖြစ်မှာပါခင်ဗျ။
GamingNoodle : MLBB ကိုဘာလို့ စပြီး ဆော့ဖြစ်ခဲ့တာလဲဗျ?
Kid : ကျွန်တော်က MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) game တွေပိုစိတ်ဝင်စားလို့ပါခင်ဗျ။
GamingNoodle :Kid ဆိုတဲ့ In-game name ကို ဘယ်လိုပေး​​ဖြစ်ခဲ့တာလဲ?
Kid : ကျွန်တော့်အရင် squad ဖြစ်တဲ့ Team Accident မှာ ကျွန်တော်က အငယ်ဆုံး player ဖြစ်နေတော့ kid လို့ပေးဖစ်သွားတာပါ။
GamingNoodle :ဘယ်အချိန်မှာ Professional ဆော့မယ်လို့ စ​ပြီး စိတ်ကူးခဲ့လဲ?
Kid : Huawei nova champion Season1 ​အပြီးမှာပါ။
GamingNoodle :Professional ဘဝကို ဘယ်အသင်းနဲ့ စတင်ခဲ့လဲဗျ။ ဆော့ခဲ့ဖူးတဲ့အသင်းတွေကိုလည်းပြောပြပေးပါဦး။
Kid : Team Resolution, Maven Esport, Claw Esport တို့မှာ ဆော့ခဲ့ပါတယ်။
GamingNoodle :Claw ကနေ BG ကို ဘာလို့ ပြောင်းလာတာလဲ?
Kid : ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတစ်ခု အတွက် အပြောင်းအလဲ လုပ်ခဲ့တာပါ၊ ဒါက ကျွန်တော့် အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့ အခါမှာ ကံဆိုး ကံကောင်းပဲဗျ၊ ကျွန်တော့်အိပ်မက်ဖြစ်တဲ့ champion ​ဖြစ်ဖို့ အသင်းပြောင်းခဲ့တယ်၊ ပီးတော့ နဂိုတည်းက BG အသင်းသားတွေနဲ့ ရင်းနှီး​ပြီးသား ဖြစ်နေတာလည်းပါပါတယ်။
GamingNoodle :BG မှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခြေအနေနဲ့ အခြားအရင်က ဆော့ခဲ့တဲ့ အသင်းတွေကြားမှာ ကွာခြားမှုရှိလား?
Kid : Training တွေကို သေချာဂရုတစိုက်နဲ့ ဆော့ဖြစ် လာပါတယ်။
GamingNoodle :MPL Season3Myanmar အတွက် ဘယ်လို ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့လဲ?
Kid : အများကြီးပဲဗျ တော်တော်တော့ အချိန်ယူပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်၊ ပင်ပန်းသလို ပင်ပန်းတာနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ရလဒ်လည်း ရရှိခဲ့လို့ ပျော်ပါတယ်။
GamingNoodle :မလေးရှား World Champion M1 ပွဲအတွက်ရော ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားလဲ?
Kid : Training တွေ ပြီးတော့ အခြားအသင်းတွေရဲ့ ပွဲတွေပြန်ကြည့်၊ လေ့လာသင့်တာ လေ့လာပြီး မြန်မာကိုယ်စားပြုအဖြစ်အကောင်းဆုံး ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာပါ။
GamingNoodle :ပထမဆုံး နိုင်ငံခြား LAN Final ပွဲအတွက် ဘယ်လိုခံစားရလဲ?
Kid : လောလောဆယ်ကတော့ စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်၊ လုပ်နိုင်မယ်လို့လဲ ယုံကြည်ပါတယ်။
GamingNoodle :ညီက အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ Professional ကစားသမားဖြစ်နေတာဆိုတော့ မိဘတွေကရော ဘယ်လို Support ပေးလဲ?
Kid : မိသားစု က ကျတော့ကို လိုအပ်တာ မှန်သမျှ support လုပ်ပေးပါတယ်။ အဲ့အတွက်လည်း ကျွန်တော့် မိဘတွေ ကိုနားလည်ပေးလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
GamingNoodle :မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအကောင်းဆုံး mid player ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေ သတ်မှတ်နေကြတဲ့အပေါ်ရော ဘယ်လိုမြင်လဲ?
Kid : ကျွန်တော်က တော့ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာထက်ပိုပြီး အကောင်းဆုံးဆော့ပါတယ်၊ အကောင်းဆုံးလို့သတ်မှတ်ဖို့ ကျတော့ အသင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး back up တွေ မရှိပဲ သတ်မှတ်လို့တော့ မရဘူးဗျ။
GamingNoodle : MLBB အပြင် တခြား ဘာဂိမ်းတွေဆော့ဖြစ်သေးလဲ?
Kid : Dota Underlords, Vainglory, Clash of Clan, Clash of Royals စတဲ့ ဂိမ်းတွေတော့ ဆော့ဖြစ်ပါတယ်။
GamingNoodle : ညီ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေရော BG ပရိသတ်တွေကိုပါ အမှာစကားလေးပြောပေးပါဦး။
Kid : ကျွန်တာ့် ကိုအားပေးနေတဲ့ သူတွေရော အသင်းကိုအားပေးနေတဲ့ သူတွေရော ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် M1 မှာ champion ရအောင် BG နဲ့ အတူ ကြိုးစားသွားပြီး ပါမယ်လို့လည်း ကတိပြုပါတယ် ခင်ဗျာ။
အခုလို အချိန်ပေးပြီ ဖြေကြားပေးတဲ့ Kid နဲ့ မြန်မာကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် Burmese Ghouls MLBB တစ်သင်းလုံးကို World Championship ပြိုင်ပွဲမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရလာပါ​စေလို့ ကျွန်တော်တို့ Gaming Noodle မှ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။